ब्वाइफ्रेण्डले ग्रीन कार्ड पाउलान् ?
२०७४ चैत्र १० शनिबार|2018-03-24
प्रकाशित: २०७४ कार्तिक २५
प्रश्न : म डीभी लटरीअन्तर्गत ग्रीनकार्ड लिएर युएसए आएकी हुँ । म आएको २ वर्ष मात्र भएको छ । मेरो ब्वाइफ्रेण्ड अहिले ओपीटीमा हुनुहुन्छ र यसपालिको एच–१बी भिसाका लागि पेटिसन पेश गर्नेवालामा हुनुुहुन्छ । हामी विवाह गर्ने निर्णयमा छौं र आई–१३० पेटिसन पनि पेश गर्ने भएका छौं । मेरो प्रश्न यो छ कि यदि मेरो श्रीमान्ले एच–१बी भिसा प्राप्त गर्नुभएन भने के मेरो आई–१३० पेटिसनको आधारमा उहाँको भिसा मेन्टेन हुन्छ होला ? के मैले पेश गरेको आई–१३० पेटिसनको आधारमा उहाँले ग्रीनकार्ड पाउन सक्नुहुन्छ होला ? उत्तरका लागि आभारी हुनेछ ।
– सीमा, अमेरिका
तपाईंको ब्वाइफ्रेण्डसँग विवाह गर्ने निर्णय भइसकेको भए विवाह गरी आई–१३० पेटिसन फायल गर्नुभएमा राम्रो हुनेछ । तपाईं ग्रीनकार्ड होल्डर मात्र भएकाले अहिले श्रीमान्का लागि आई–४८५ (एडजष्टमेन्ट एप्लिकेसन) युएससीआईएसमा पेश गर्न मिल्दैन । यसको कारण हो ग्रीनकार्ड होल्डरहरुको स्पाउसेसहरु फेमिली बेस्ड भिसा पेटिसनको सेकेण्ड प्रिफरेन्स (एफ२ए)मा पर्ने भएको र उनीहरुका लागि इमिग्रान्थ भिसा करेन्ट नभएकाले आई–१३० र आई–४८५ एप्लिकेसन एकैसाथ फायल गर्न मिल्दैन । त्यसैले तपाईंको आई–१३० पेटिसन एप्रुभ भए पनि जबसम्म भिसा उपलब्ध हुँदैन, तबसम्म उहाँले आई–१३० को आधारमा एडजष्टमेन्ट गर्न सक्नु हुने छैन ।
आई–१३० को आधारमा एडजष्टमेन्ट गर्नका लागि बेनिफिसियरी स्पाउसले अनिवार्यरुपमा ननइमिग्रान्ट भिसा (जस्तै एफ–१, एच१बी इत्यादी) मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ । यदि बेनिफिसियरीले स्टाटस गुमाउनुभयो वा आउट अफ स्टाटस हुनुभएमा आई–१३० को आधारमा ग्रीनकार्ड पाउन मिल्दैन । त्यस अवस्थामा पेटिसनिङ स्पाउस युएस सिटिजन हुनुपर्ने हुन्छ ।
अब तपाईंको केसमा तपाईंको श्रीमान्ले एच–१बी भिसा पाउनुभयो भने सो भिसा ३ वर्षका लागि एकचोटिमा) भ्यालिड हुने भएकाले तपाईंले पेश गरेको आई–१३० पेटिसनको आधारमा भविष्यमा एडजष्टमेन्ट गर्न सक्ने सम्भावना हुनेछ । तर, यदि एच–१बी भिसा उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने र यदि उहाँ आउट अफ स्टाटस (इलिगल) हुनुभयो भने उहाँले ग्रीनकार्डका लागि एप्लाई गर्नका लागि तपाईं युस सिटिजन नहुञ्जेल पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।
यदि एच–१बी भिसा नपाए पनि (यस वर्ष गतवर्षझैं एच–१बी भिसा लटरी हुने भएकाले) अन्य कुनै ननइमिट्रान्ट भिसामा चेन्ज अफ स्टाटस गर्नु भएर भिसा मेन्टेन गर्नुभएमा एफ–२ब् क्याटगोरीको इमिग्रान्ट भिसा ‘भिसा बुलेटिन’मा तपाईंको आई–१३० पेटिसनको प्रायोरिटी डेटका लागि उपलब्ध वा ‘करेन्ट’ भएमा तपाईंको श्रीमान्ले आई–४८५ एप्लिकेसन युएससीआईएसमा पेश गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसैले तपाईंले पेश गरेको आई–१३० पेटिसनका आधारमा मात्र उहाँको स्टाटस मेन्टेन हुने छैन र उहाँले इनडिपेन्डेन्ट्ली ननइमिग्रान्ट भिसा कायम राख्नुपर्ने हुन्छ ।